War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay Mas'uuliyadda weerar khasaara badan dhaliyay oo shalay ka dhacay gudaha wadanka Kenya.
Al Shabaab waxay sheegtay in weerar ciidamadeedu ku qaateen iskuul kuyaal gobolka Wajeer ay ku dileen sedax Macallimiin Kenyaan Kirishtan ah islamarkaana ay qarax ku burburiyeen gaari dagaal oo ay wateen ciidamada Booliska Kenya.
"Mujaahidiinta ayaa weerar lagu dilay dad Nasaara Kenyaan ah ka fuliyay gobolka Wajeer ee NFD, howlgalka oo ahaa mid qorshaysan waxaa lagu khaarijiyay sedax Nin oo Kirishtaan ah iyadoona qarax Miino lagu burburiyay gaari ay wateen ciidamada Booliska" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Weerarkan oo shalay aroortii hore ka dhacay Dugsiga Hoose ee Qarsa ayay saraakiisha Booliska Kenya ku sheegeen in uu ahaa mid halis gelinaya shaqaalaha wasaaradda Waxbarashada.
Warka kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu sheegay in 'Mujaahidiinta' ay bartilmaameed u yihiin dhammaan dadka Kenyaanka ee aan Muslimka aheyn kuwaas oo xoog ku heysta dhulalka muslimiinta sida gobollada NFD iyo Lamu.
Al Shabaab ayaa sanadadii lasoo dhaafay si firfircoon weerarro uga fulinaysay gobolka Waqooyi Bari loo bixiyay ee gumeysiga kujira, isbuucii lasoo dhaafay ayay aheyd markii xoogaga Al Shabaab ay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhigga ciidanka Kenya ee deegaanka Ceel Raam.